Seho 5 nozarain'ny LG G5 sy Samsung Galaxy S7 | Androidsis
Manuel Ramirez | | LG, MWC, Samsung
Amin'ny faran'ity herinandro ity dia hanana isika ny fahatongavana tamin'io andro io ihany tamin'ny sambo roa avy amin'ny Samsung sy LG miaraka amin'ny Galaxy S7 sy G5. Fantsona roa izay hifanatrika ora vitsivitsy eo anelanelan'ny hetsika samihafa izay haseho azy ireo. LG nanaitra anay roa herinandro lasa izay ny doka G5 sy io GIF mihetsika io izay nampiantso ny mpanao gazety tamin'io andro io 21 Febroary ora vitsy talohan'ny nanolorana ny Galaxy S7. Tsy tena fantatsika ny antony, fa ny mazava dia izao dia ho andro tsara hananana finday Android roa tsara indrindra amin'ny taona ao amin'ny Mobile World Congress. Ny tena mahaliana dia ny miandry valiny sasany avy amin'ny Samsung rehefa aseho ny S7 ary fantany ny sasany amin'ireo famaritana natombok'i LG ary raha toa izy ireo afaka mamoaka fanafihana mialoha mialoha izay ho tonga amin'ny ora maro rehefa ny CEO ny Samsung ento eny an-tananao ilay Galaxy vaovao.
Ankoatra ny fizarana iny andro iny ihany ho an'ny famelabelarana, ny LG G5 sy Samsung Galaxy S7 mizara toetra miavaka vitsivitsy ary handeha hanao lisitra eto ambany izahay. Fantsona roa izay misy fitoviana maro ary koa eo amin'ny làlambe izay ahafahana mivoaka avy amin'izany dia miankina amin'ny tena ahatanterany ny andrasana. Izany dia indrindra noho ny toe-javatra misavorovoro eo amin'ny tsenan'ny Android amin'izao fotoana izao ary misy mpampiasa maro izay nanilika ny avo indrindra handeha any amin'ny terminal sasany izay 100 € dia afaka mamindra fihetseham-po tena tsara miaraka amin'ny fitaovana matanjaka. izay mamela anao hahazo traikefa Android mahafinaritra.
1 Fampisehoana an-tsary foana
2 Fitaovana fantsom-tànana
4 Famolavolana vy amin'ny ampahany
5 Fanohanana karatra fitadidiana SD
Fampisehoana an-tsary foana
Ny herinandro lasa teo LG dia nanamafy tamina teaser fa hanana izany efijery mavitrika foana izay ahafahan'ny mpampiasa mahafantatra ny ora firy na raha nahazo fampandrenesana izy ireo. Panel iray mitovy amin'ny Motorola's Active Display ary hanolotra fomba fiasa voalohany ho an'ny mpampiasa hahalala raha manana hetsika kalandrie, hafatra, antso na mailaka izy ireo nefa tsy mila mamadika ny efijery lehibe.
Samsung koa manana ny mampiavaka azy amin'ny fanaovana efijery mavitrika sy ny sisin'ny Galaxy S7 ary S7 no roa voalohany hahazo tombony amin'ity endri-javatra vaovao ity. Ny sisa tazonina dia ny fomba hampidirin'izy ireo azy, na dia toa misy ifandraisany amin'ilay efijery "foana" foana aza ny écran.
Zavatra iray izay lasa amin'ny saika mandatory ho an'ny telefaona farany ambony ary midika izany fa manana fiarovana hafa ny mpampiasa na fomba hafa hamohana ny findainy nefa tsy mila mandalo lamina na PIN.
Samsung dia nampiditra an'ity sensor ity tao amin'ny Galaxy S5 sy Galaxy S6, ary ao amin'ny Galaxy S7 no hahitantsika azy tafiditra ao amin'ny bokotra an-trano. Ny LG G5 no terminal tsy mitovy amin'ny G4 amin'ny fananana azy, satria ity farany ity dia tsy hita fa afaka manararaotra ny fandoavam-bola amin'ny finday.
Ny sensor an'ny dian-tànana amin'ny G5 dia afaka mitovy amin'ilay hita amin'ny LG V10 satria any aorian'ny faran'ny terminal no misy azy.
Na dia mahita vaovao vitsivitsy aza izahay izay mampiseho ny fomba amahan'ireo mpamatsy an'ity karazana tariby USB karazana-C ity miteraka olana lehibe, izahay handeha amin'ny fenitra vaovao isika. Tena ho hitantsika izany amin'ny Samsung Galaxy S7 sy LG G5.
Anisan'ireo tombony amin'ity karazana seranan-tsambo sy tariby ity ny kely izy ireo ary azo ovaina. Azonao atao ihany koa ny miditra amin'ny fahatsiarovana USB izay azo ampifandraisina amin'ny iray amin'ireo terminal roa ireo mba handefasana rakitra mivantana amin'ny solosaina amin'ny alàlan'ny fametahana azy amin'ny seranana iray ihany (ireo avy amin'ny Sony).
Amin'ireo Galaxy S7 mihitsy dia voalaza fa hitondra fiampangana haingana, fa ny tsy fantatra dia ny hanana fampiasa mitovy amin'ny LG G5.
Famolavolana vy amin'ny ampahany
Ny LG G5 dia ho ny terminal voalohany an'ity mpanamboatra Koreana ity amin'ny vita amin'ny vy. Raha ny tsiliantsofina dia miatrika G5 metaly tanteraka isika raha any amin'ny S6 kosa mankany amin'ny iray izay misy ny lamosina vita amin'ny vera ka vy ny endriny.
Raha fintinina dia miatrika isika famaranana premium ho an'ireo sainam-pirenena roa ireo, izay amin'ny farany no resahina rehefa miresaka avo lenta isika.
Fanohanana karatra fitadidiana SD
Farany dia afaka miteny isika fa hanana ny mety manitatra ny fahatsiarovana ny Samsung Galaxy S7 rehefa nesorina tamin'ny Galaxy S6 ity fiasa ity. Avy amin'ny LG G5 dia azo antoka fa hanana an'io fampiasa io indray isika tahaka ny nitranga tamin'ny G3 sy G4.
Endri-javatra lehibe iray ho an'ny mpampiasa maro mba hananany fitaovana ahafahany manao izany mitahiry karazana atiny multimedia rehetra havaozina amin'ny alàlan'ny finday avo lenta izay manana fampiasa hafa iraisana dia efijery lehibe sy fitaovana matanjaka mba hananana tombony betsaka amin'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » Ny fiasa manandanja indrindra izay hizaràn'ny Samsung Galaxy S7 sy LG G5
LG dia manambara ny LG X Cam sy X Screen alohan'ny MWC